Loacker Crispy Wafers Filled With Green Tea Cream Matcha Pack Of2– SUNNY eSTORE
Loacker Crispy Wafers Filled With Gre...
Loacker Crispy Wafers Filled With Green Tea Cream Matcha Pack Of 2
SUNNY Everyday StoreSKU: 80899440
ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားသည့် မြင့်မြတ်သော ဂျပန်လက်ဖက်စိမ်း၏ သန့်စင်ထားသည့်အရသာ။
အရသာကို ပြန်လည်တွေ့ရှိဖို့ အဆင်သင့်လုပ်ထားပါ။ မြင့်မြတ်သည့် လက်ဖက်စိမ်း၏အစပျိုးရာအရပ် ဖြစ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မီးတောင်များရှိသည့် ကုန်းမြင့်များကို ကြိုဆိုပါသည်။ အပင်များသည် အရိပ်ရ သည့်နေရာများတွင် လှပစွာကြီးထွားလာပြီး၊ ၎င်းတို့၏နုသည့်အဖူးလေးများနှင့် အမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသည့် အရွက်များအား ဂရုစိုက်ပြီး ခူးယူရသည်။
ထုတ်ကုန်၏ ၇၁% ဖြစ်သည့် Matcha (ဂျပန်ရိုးရာလက်ဖက်စိမ်း) ခရင်မ်အလွှာပါးလေးတစ်ခုအား ပါးလွှာကြွပ်ရွသည့် ဝေဖာလွှာနှစ်ခုကြားတွင် ထည့်သွင်းထားကာ၊ သန့်စင်ထားပြီး ပေါ်လွင်သည့်အရ သာကို ပေးသည်။ ဘဝ၏စည်းစိမ်ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်သူအစစ်တို့အတွက် မိမိကိုယ်မိမိ စစ်မှန်သည့် အတိသုခကို ခံစားဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ။
အရေအတွက် - Loacker Crispy Wafers Matcha ၂ ထုပ်
The refined taste of finely ground, noble, Japanese green tea.
Get ready to rediscover taste! Welcome to Japan's volcanic hills, the cradle of the noble green tea. The plants are grown lovingly inashaded area, and their young buds and the highest leaves are carefully harvested. A light layer of Matcha cream filling,agood 71% of the product, is enclosed between two light and crispy wafer layers, deliveringarefined and bold taste. For true connoisseurs of the luxuries in life... it's time to treat yourself to pure bliss!
Includes:2packs of Loacker Crispy Wafers Matcha